PinePhone inoshandisa Manjaro nePlasma interface nekutadza | Linux Vakapindwa muropa
PINE64 yatove yakasarudza iyo yekushomeka inoshanda sisitimu yePinePhones yayo: Manjaro nePlasma interface
Mukutanga kwaKukadzi, takadzokorora nhau dzaityisa: iyo PinePhone Nharaunda Yekutsikirira yaisazogadzirwa. Pakutanga, taifunga kuti chimwe chinhu hachina kumira zvakanaka, kuti vaigona kusiya chirongwa ichi, asi mutsamba yavo vakati kwete, kwaingova kutanga uye chavaida kusarudza sisitimu inoshanda kuti vese pinephone ramangwana richarishandisa nekukanganisa. Iyo nguva yatouya uye isu tatova newakundi.
Ini pachangu uye kubva pane zvandakaedza paPineTab, hazvindishamise kuti izvo zvavakazivisa mukati tsamba ino ya Kukadzi ndiyo iyo yakasarudzwa sisitimu yekushandisa ndiyo Manjaro. Inoshanda chaizvo uye, pachokwadi, kunyangwe yakamira pahwendefa, ndivo vaive vekutanga kuwana zvakawanda zvakakosha kubudirira, senge yakanaka Hardware kumhanyisa kana kuti iwo desktop desktop anowirirana zvakakwana. Arch Linux inoshandawo zvakare, asi ini ndanga ndagara ndine chivimbo chekuti Manjaro yaizoita kuti zvinhu zvive nani. Uye zvave zvakadaro, kusvika pakutora katsi mumvura.
PinePhone inoshandisa imwe chete sisitimu yekushandisa kubva ikozvino
Chakanyanya kundityisa yaive interface. Kune basa rakawanda riri kuitwa naPhosh, uye handizvifarire zvachose. Inogona kutaridzika zvakanaka, uye inoita, patinoishandisa padhuze nekhibhodi kana tichida kuibatanidza kune yekunze yekutarisa, asi ruzivo rwetactile runosiya zvakanyanya kudikanwa. Nechikonzero ichocho, mabheti angu andaida aive Lomiri, kubva kuUBports, kana Plasma Mobilene KDE. Ini ndinoda Lomiri zvirinani nekuda kwemasaini uye zvimwe zvimwe zvakaita sekhibhodi, asi chokwadi ndechekuti maapps avo haasi akanakisa, kubva pane zvandinonzwisisa PINE64 uye nesarudzo yavo yekusarudza Manjaro + Plasma.
Rumwe ruzivo rwacho mutsamba yaFebruary harunakidze, zvirinani kune sevha imwe chete, asi Ndinoda kuziva kana ivo vachizoita zvakafanana nePineTab uye kana vachizosarudza mubatanidzwa mumwe chete. Mufananidzo wazvino weManjaro wepiritsi PINE64 yakaburitswa munaGumiguru, uye haina kubva kure nzira kubva ipapo. Chero zvazvingaitika, iri imwe nyaya uye chimwe chigadzirwa, uye sarudzo yakaitwa naPINE64 inoita kunge yakanaka kwandiri, kunyanya semushandisi wePlasma pamakomputa matatu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » PINE64 yatove yakasarudza iyo yekushomeka inoshanda sisitimu yePinePhones yayo: Manjaro nePlasma interface
hupenyu hushoma akadaro
Zvese izvi, zvinosuruvarisa, zvakafanirwa kufa, iwe wakangozvisimbisa iwe pachako, pasina chero gadziriso kubva muna Gumiguru. Kana izvi zvese zvikatora makore mashanu, zvichave zvakawanda, makore mashoma ndinovapa kuti vasiye chirongwa ichi.
Mhoro: kutaura kwangu ndekwePineTab, uye kusavapo kwezvigadziriso kuri muchimiro chemifananidzo, kwete muchirongwa pachacho. Ivo vari kutarisa zvakanyanya parunhare, asi iwo akasiyana misoro. Mumwe muenzaniso: Ini ndinokupindura kubva kuManjaro Xfce-USB, unova mufananidzo wekuti uve naManjaro pa USB nekuramba uchichengeta kuti uishandise pane chero komputa. Mufananidzo wacho unobva muna APRIL 2020, uye ndiri pano ini, ndakagadzirisa zvese kune yazvino vhezheni. Ngatisakanganwe kuti Manjaro iri (semi) Rolling Kuburitswa.
PS: Sei iwe uchinyora makomendi mazhinji uye nemazita emadunhurirwa akasiyana siyana? Sei usisarudze imwe? Mune chero foramu, izvo zvaisazobvumidzwa. Sarudza imwe uye chengeta kana zvichigona.
Unogona here kupindura kana kuita chinyorwa mune zvakadzama kupfuura chero munhu anowanzoita nezve izvi Linux OS pane asiri-Android Mobiles? (Iyo redundancy yeLinux ecosystem isina kujeka).
Semuenzaniso, ivo vanokukumbira iwe password kuti uvandudze, iwe unogona kupinda semidzi, unogona kugadzira vashandisi vakasiyana, iwe unogona kuisa nekushandura mamiriro edesktop pese paunoda kana iwe unofanirwa kuifomatira izvo, zvinoenderana nemidziyo yekunze, inogona kubatanidzwa kune windows pc kana linux kana mac, maapplication akafanana neaya anowanikwa pane desktop uye kana ari iwo anotaridzika uye unogona kushanda paari (basic office automation), classic linux mitambo seSuperTuxKart inogona inoshandiswa zvakajairika, ko zvakamira sei emulators ezvinyaradzo izvo nostalgic linuxers anoshandisa zvakanyanya (ini handizive, iwe unogona kutamba uchipesana kana kutevedzera CSOTN paPinephone kana Pinetablet kazhinji kana iwe uchida zvinongedzo) , uye zvakadii nezve kuenderana neApple maapplication (Sezvo ini ndichiziva kuti timu yeManjaro yanga ichishanda kugadzira mamwe maapplication, asi mamwe anoaita, ndeapi anozviita pasina matambudziko)?.
Mune mamwe mazwi, edza kuitengesa kwandiri (kunyangwe ndichigara muVenezuela uye zvese zvinoenda kwandiri muchikafu nekuda kwehukama), kuti zviite zvinakidze uye kana mumwe munhu muPine64 achiziva chiSpanish uye achiverenga chinyorwa chako, vanogona kukutenda. Kukwazisa nekumbundirana.
Ruzivo rwakawanda, uye ndaona zvese zvichiitwa. Asi ngatione kana ndichigona kugadzirisa kumwe kupokana kwako:
-Hungu, inokumbira password, asi vese vane imwe yakagadzirirwa nekukasira semamwe mifananidzo. Unogona kuzvichinja.
-Hungu unogona kugadzira vashandisi vakawanda.
-Iwe unogona kushandisa chero nharaunda, asi hazvisi nyore. Vaya vanozviita vanozviita kubva pamufananidzo we "barebone". Izvo hazvikurudzirwe kuzviita senge paPC.
-Iyo masisitimu anowirirana nekunze zvigadzirwa. Zvinoenderana nechishandiso nemachiteshi ayo kuti ugone kuzvishandisa, kana iwe ungangoda adapta yekushandisa vamwe (senge USB kana uri pafoni).
-Zvinoenderana nesisitimu, unogona kushandisa desktop desktop. Ivo vanotaridzika kuva vakanaka, uye Manjaro uye Arch Linux vanozadza skrini zvakanaka, zvirinani paPhosh uye ini ndinofunga paPlasma.
-Iye SuperTuxKart handigone kukuvimbisa, asi ini ndaona matambiro avakaita nevamwe emulator seRetroArch. Steam ingangoita, asi ini handina kuyiyedza futi.
-Kuenderana neApple maapplication chinhu chavari kushanda (Anbox), asi hachishande mushe nekutadza mune chero chazvo.
-Handina kumboona maapplication achirovera kakawanda, asi kana ikakubvumidza iwe kuwana iyo terminal, unogona kuipedza.
Panyaya yekuita, mazuva ano haisi yakanyanya kunaka. Ini ndiri mune mamwe mapoka ane vashandisi uye vanogadzira uye vamwe vanotaura kuti vanoda zvirinani zvinhu. Ivo vanotarisira kuti zvese zvichavandudza mune ramangwana, asi ikozvino ini handingatenge imwe yeaya mafoni kana mapiritsi kuti ndivimbe nawo. Panguva ino ivo vanofanirwa kubatana pamwe nenharaunda uye kuyedza zvinhu, asi kwete kushanda uye kunakidzwa nazvo.
PS: Ini ndakapotsa ndakanganwa, ruregerero rwembiri post, mashandiro eManjaro sisitimu pamwe nekuita kwechigadzirwa?. Unogona here kuraira "kuuraya" kune yakasungirirwa kunyorera? Revererai kuwandisa kwemibvunzo, asi ini handioni chero munhu achipa mhando dzeruzivo idzi, zvinoita sekunge havadi "kutengesa system" kwatiri, uye sekuziva kwangu zvinhu zvizhinji zvandatsanangura ndezvekuti isingatenderwe kune vashandisi muApple. Kune rimwe divi, ini ndiri kufarira kwazvo maitiro ekuita, ndanga ndichishanda neAcer Aspire 4935 ndichishandisa Manjaro XFCE kweanopfuura makore matanhatu uye ini ndangova ne6 dambudziko rakakura randaifanira kushandisa usb-kurarama dzorera sisitimu nekuda kwekutadza kwekuvandudza. Ndakaedza kushandisa Plasma kamwe, yakanaka kwazvo uye yakanaka kushandisa, asi ichienzaniswa neXFCE inodya yakaipisisa RAM iyo ini ndakanga ndisina hunyanzvi hwekumupa.